Man United Oo Ugu Danbayn Heshiiska Pogba Dhamaystiraysa 48-ka Saacadood Ee Soo Socda Iyo TOBANKA Ciyaartoy Ee Caawa Ugu Qiimaynta Sareeya Suuqa Kala Iibisaga Ciyaartoyda - Wargane News
Home Sports Man United Oo Ugu Danbayn Heshiiska Pogba Dhamaystiraysa 48-ka Saacadood Ee Soo...
Asalaamu calaykum waraxmatulaah , habeen wanaagsan ama waqti kasta oo aad joogtaan oo wanaagsan dhamaan akhristayaasha sharafta iyo ixtiraamka naga mudanow ku soo dhawaada barnaamujkeenii maalin laha ahaa ee tobanka ciyaartoy ee ugu qiimaynta sareeya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kuwaas oo aanu si joogto ah idiinku soo gudbino maalin kasta.
Ciyaartoyda inta ugu badan looga hadlay suuqa kala iibisaga isla markaana lala xidhiidhinayo kooxo cusub ayaa marar badan u dhacda sida loo qiimeeyay waxaana liisaskii hore ee aanu diiin soo gudbinay ka baxay ciyaartoy qiimaynta hadba meel kaga soo jiray. Suuqa kala iibisaga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmay waxayna koox kastaaba u furan tahay in ay samayso saxiixyo cusub.
Football Whispers oo ah shabakada ugu horaysa dhinaca saadaalinta suuqa kala iibisaga ayaa qiimayn khaas ah ku samaysa wararka ciyaartoyda sida wayn loogaga hadlo suuqa kala iibsiga, waxayna si joogto ah u soo gudbisaa hadba ciyaartoyda loogu hadal haynta bad
Qiimaynta Football Whispers ee suuqa kala iibisaga waxaa ugu sareysa 5 oo ah xiddig sida ugu weyn loo hadal hayo waxayna Sky Sports iyo Football Whispers ay iska kaashadaan in ay hadba soo saaraan ciyaartoyda suuqa kala iibsiga sida wayn looga hadal hayo iyo qiimaynta oo la socota. Habddaba Shabakada Laacib.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa tobankii ciyaartoy ee maanta suuqa inta ugu badan looga hadlay.
Qiimaynta liiska aanu sida joogtada ah idiinku soo gudbino ayaa noqday mid saamayn wayn ku leh suuqa kala iibisaga waxaana jira ciyaartoy si joogto ah liiskan uga baxa oo ku biira kooxihii lala xidhiidhinayay, sidaa daraadeed qiimayntan ayaa noqotay mid si wayn loogu saadaalin karo suurtogalnimada ciyaartoyda xagaagan baxaysa. Waxaana ugu danbeeyay oo liiskan ka baxay isla markaana maalmihii ugu danbaysay safka hore ku jiray Gonzalo Higuain oo 90 milyan oo euro ugu biiray kooxda Juventus.
Waxa kale oo qiimaynihii ugu danbeeyay ugu sareeyay Brad Smith oo si rasmi ah ugu biiray kooxda Bournemouth iyada oo Liverpool xidiga ree Australia ku biisay 6 milyan oo gini. Sidaa daraadeed, waxaan markale filaynaa in liiska aan hadda idiin soo gudbinayso ay jiri doonaan xidigo dhawaan ka bixi doonaa.
War wayn ayaa ka soo kordhay heshiiska hadal-hayntiisa laga daalay ee uu Paul Pogba ugu biirayo Manchester United waxaana ugu danbayn la filayaa in Man United ay heshiiska Pogba dhamaystiri doonto 48 ka saacadood ee soo socda. Wariyaha sida wayn loo ixtiraamo ee Gianluca Di Marz oo ah wariye Talyaani ah ayaa sheegay in ugu danbayn xal laga gaadhay heshiiska Pogba. In heshiiska Pogba xal laga gaadhay ayaa keentay in markiiba ay qiimaynta suuqu sare u kacdo waxaana caawa lagu qiimaynayaa 4.5 isaga ayaana kaalinta kowaad hogaaminaya.
Waxaa kaalinta labaad soo galay Alexadre Lacazette oo ay wali Arsenal daba socoto inkasta oo ay kooxda Lyon soo diiday dalabkii 35 ka milyan ee euro ahaa. Kooxda Lyon ayaa xidigeeda ku doonaysa ugu yaraan 40 milyan oo gini. Qiimaynta ugu danbaysa caawa ee Lacazette ayaa ah 4.2.
Waxaa kaalinta saddexaad ku jira difaaca kooxda Napoli ee Koulibaly kaas oo ay Chelsea ka gudbisay dalab 38 milyan oo gini ah. Qiimaynta caawa ee Koulibaly ayaa ah 4.1. Kooxda Napoli ayaan wali ka soo jawaabin dalabka ay Chelsea difaacan ka gudbisay.
Haddaba akhriste halkan kaga bogo dhamaan tobanbka ciyaartoy ee caawa suuqa kala iibsiga ugu qiimaynta sareeya, kooxaha lala xidhiidhinayo iyo waliba qiimaynta suurtogalnimada ay kooxahan ugu biiri karaan oo dhamaystiran: